आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न ६५ जना भारतीय फरार, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न ६५ जना भारतीय फरार
चितवन । आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न ६५ जना भारतीय फरार रहेका छन्।
उनीहरुलाई चितवन जिल्ला अदालतले कैद र जरिवानाको फैसला गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। अदालतका तहसिलदार धनीराम चापागार्इंका अनुसार १० जनाको कैद भुक्तान, ३६ जनाको जरिवाना असुल र १९ जनाको जरिवाना र कैद भुक्तान दुवै हुन बाँकी छ। विगत लामो समयदेखि भएको फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।
उनीहरुविरुद्ध लागुऔषध, जबर्जस्तीकरणी, चोरीलगायतका मुद्दा फैसला भएका हुन्। अदालतले प्रहरीसँग सहकार्य गरेर फैसला कार्यान्वयन विशेष अभियान सञ्चालन गरेको भए पनि विदेशी नागरिक पक्राउ पर्न सकेका छैनन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रभुप्रसाद ढकालका अनुसार नेपालमा नभेटिएका गम्भीर अपराध गरेका विदेशी अपराधीलाई इन्टरपोलमार्फत् सूचना जारी गरेर झिकाइने बताए।
अदालतबाट फैसला भएका गम्भीर अपराधका नभएकाको हकमा भने प्रहरीले इन्टरपोलको सहायता नपाउने भएकाले कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन हुने गरेको छ। अदालतमा हालसम्म कैद र जरिवाना भुक्तानी गर्न चार हजार १७६ जना नेपाली बाँकी रहेका छन्।
अदालतले दिएको जानकारीअनुसार ४४७ जनाको कैद, दुई हजार ७४० जनाको जरिवाना र ९८९ जनाको कैद तथा जरिवाना दुवै भुक्तान गर्न बाँकी छ।
अदालतले गत वर्ष फरार रहेका २२९ जनाको १२ वर्ष १० महिना आठ दिन कैद र रु १९ लाख सात हजार ४३१ जरिवाना असुल गरेको छ। सात जनाको कैद, ११३ जनाको जरिवाना र नौ जनाको दुवै सजाय असुल गरेको अदालतले जनाएको छ।
अदालतले नेपाली र विदेशी गरी चार हजार २४० जनाको रु ११ करोड ८९ लाख ९३ हजार १३ जरिवाना र दुई हजार १८४ वर्ष नौ महिना २९ दिन कैद असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले रु दुई करोड ३१ लाख २२ हजार ७९५ जरिवाना र ९०४ वर्ष ११ महिना कैद असुल गरेको थियो। गत आवमा अदालतमा फैसला कार्यान्वयन गर्न ३५० निवेदन परेकामा २५९ निवेदन कार्यान्वयन भएको र ९१ बाँकी रहेका छन्।रासस